ဓာတ်ပုံများကို ဗီဒီယိုများအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ပရိုဂရမ်များ - VidaBytes | LifeBytes
ဓာတ်ပုံများကို ဗီဒီယိုများအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် အစီအစဉ်များ
Iris Gamen | 13/06/2022 22:31 | အစီအစဉ်များ
သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရောဂျက်များကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် သင့်ဓာတ်ပုံများကို ဗီဒီယိုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါက သင်သည် နေရာမှန်တွင် ရှိနေပါသည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးအခမဲ့နှင့် အခပေးအစီအစဉ်အချို့ကို ညွှန်ပြပါမည်။ သင့်ဓာတ်ပုံများကို 360 ဒီဂရီအလှည့်ကျဖြစ်စေရန် အကောင်းဆုံးကိရိယာများကို သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုတို့ကို ပေါင်းထည့်မည်ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုများနှင့် ကာတွန်းပုံများ နှစ်ခုစလုံးသည် အလွန်ထူးခြားသည့်အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်၊ အချိန်တိုလေးအတွင်း ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်ထံ တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ချ်ကို မှန်ကန်စွာ လွှင့်တင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံများကို ဗီဒီယိုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ ၎င်းအတွက် သီးခြားကိရိယာများကို အသုံးမပြုပါက အများစုအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝများတွင်၊ လူမှုကွန်ရက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၌ အမြင်အာရုံအကြောင်းအရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်နိုင်သည့် မတူညီသောပရိသတ်များကို အကျိုးသက်ရောက်စေရန်အတွက် အလွန်လိုအပ်ပါသည်။ တီထွင်ဖန်တီးသူအဖြစ် ငါတို့က ဘယ်သူလဲ။ ကျန်သည့်အရာများမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေါ်လွင်စေသော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ပရိသတ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိရမည်။
1 ဓာတ်ပုံများကို ဗီဒီယိုများအဖြစ် ပြောင်းရန် အကောင်းဆုံးကိရိယာများ
1.1 Adobe Spark ဗီဒီယို သို့မဟုတ် Adobe Express
ဓာတ်ပုံများကို ဗီဒီယိုများအဖြစ် ပြောင်းရန် အကောင်းဆုံးကိရိယာများ
ဤကဏ္ဍတွင်၊ သင်တွေ့လိမ့်မည်။ စျေးကွက်ရှိ ဓာတ်ပုံများ ဗီဒီယိုသို့ ပြောင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကောင်းဆုံး ပရိုဂရမ်များထဲမှ အချို့သော သေးငယ်သော ရွေးချယ်မှု. ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အင်တာဖေ့စ် ဒီဇိုင်းကြောင့် အကောင်းဆုံး မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ဆောင်ချက် အများအပြားနှင့် အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ရလဒ်ကို ရရှိရန် ရွေးချယ်မှုများကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။
Adobe Spark Video သို့မဟုတ် Adobe Express
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း Adobe package ကို သင်လိုဂိုများ၊ ဝဘ်စာမျက်နှာများ၊ အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဒီဇိုင်းများ စသည်တို့ကို ရေးဆွဲနိုင်သည့် ဂရပ်ဖစ်အနုပညာလောကမှ ပညာရှင်များနှင့် ဝါသနာရှင်များကြားတွင် လူသိများသည်။
ရှာတွေ့နိုင်သောကိရိယာများထဲမှတစ်ခုမှာ Adobe Spark Video၊aသင့်ဓာတ်ပုံများကို ဗီဒီယိုအဖြစ်သို့ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် အလွန်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် စာသားထည့်ခြင်း၊ ပြန်ဖွင့်ချိန်ကို ချိန်ညှိခြင်း၊ စိတ်ကြိုက် အပြင်အဆင်ကို ရွေးချယ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ဗီဒီယိုများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စေပါသည်။
သင်ရုံရန်ရှိသည် သင့်ပုံကို အပ်လုဒ်တင်ပြီး ၎င်းကို ဆလိုက်တစ်ခုထဲသို့ ထည့်ပါ၊ မာလ်တီမီဒီယာနှင့် စာသားပါ အကြောင်းအရာအားလုံးကို စုစည်းပါ။. နောက်တစ်ခုကတော့ slides တွေအတွက် ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကို ရွေးပြီး သင့်စတိုင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချိန်များကို ချိန်ညှိပါ၊ ဗီဒီယိုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး ပြီးပါပြီ။
အခြားကိရိယာ၊ ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုဖန်တီးသူသည် သင့်စိတ်ကြိုက်အခိုက်အတန့်များ၏ ဓာတ်ပုံအားလုံးကို တစ်ပုံတည်းတွင် စုဆောင်းရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုဖန်တီးသူ. ဤပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုသူများကြားတွင် လူသိများပြီး ၎င်းတွင် တေးဂီတ၊ ရုပ်ပုံများစွာ၊ အခြားဗီဒီယိုများ စသည်တို့ကို တစ်ပြိုင်နက် ထည့်သွင်းခွင့်ပြုထားသည်။
ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပြီး သင်အလိုရှိသော ဓာတ်ပုံများကို တင်ရပါမည်။ ထို့နောက် ဤပုံများကိုထည့်ရန် နမူနာပုံစံ သို့မဟုတ် ဆလိုက်များကို သင်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ မတူညီသောဒြပ်စင်များကို သင့်စိတ်ကြိုက်၊ တည်းဖြတ်ရန်၊ ဖြတ်တောက်ရန်၊ အရွယ်အစားပြောင်းခြင်း စသည်ဖြင့် စုစည်းပါ။. အဲဒါပြီးရင် လိုအပ်မယ်ထင်ရင် စာသားထည့်ပြီး ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ ပုံများကို ဗီဒီယိုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလိုကြပြီး စာသားများဖြင့်လည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအွန်လိုင်းတူးလ်က သင့်အား ပုံများကို အလွယ်တကူ အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်ပြီး အများသူငှာ ထိခိုက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၎င်းတို့အား ဗီဒီယိုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်စေပါသည်။ စာသား၊ စိတ်ကြိုက်ပုံစံများ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အသွင်ကူးပြောင်းမှုများကို သင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ InVideo သည် အလွန်ပြီးပြည့်စုံသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လော့ဂ်အင်လုပ်ရုံ၊ ရရှိနိုင်သော ပုံစံငါးထောင်ကျော်မှ ရွေးချယ်၍ ပုံများကို အပ်လုဒ်လုပ်ပါ။ သင်ပြောင်းလဲလိုသော၊ မတူညီသောဒြပ်စင်များနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှုများကို ပေါင်းထည့်ကာ နောက်ဆုံးတွင် အလိုရှိသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဖြင့် ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ဓာတ်ပုံများကို ဗီဒီယိုအဖြစ်သို့ အလွန်လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလိုပါက၊ ဤအွန်လိုင်းကိရိယာနှင့် ၎င်း၏ အမျိုးမျိုးသော လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သင့်အား ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ အလွန်ရိုးရှင်းသောအင်တာဖေ့စ်နှင့်အတူ၊ Animoto သည် ဒီဇိုင်းကဏ္ဍနှင့် မာလ်တီမီဒီယာလောကရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များစွာအတွက် မလွဲမသွေမဖြစ်သင့်သော ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။. Animoto တွင် သင်၏ဖန်တီးမှုကို နောက်တစ်ဆင့်သို့တက်လှမ်းရန် ကူးပြောင်းမှုများနှင့် စာသားတူးလ်များစွာ ရှိသည်။
ပုံများကို အပ်လုဒ်လုပ်ပြီး သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံး နမူနာပုံစံကို ရွေးချယ်ပါ။. ထို့နောက် ဤဓာတ်ပုံများကို ချိန်ညှိပြီး စုစည်းပါ၊ ၎င်းတို့ကို ဖြတ်ညှိပါ၊ ၎င်းတို့ကို ရွှေ့ပါ၊ စစ်ထုတ်မှုများ ထည့်ပါ စသည်ဖြင့်။ ပုံတစ်ပုံချင်းစီတွင် ထူးခြားသောစတိုင်ရှိပါစေ။ လိုအပ်သည်ဟုထင်ပါက စာသားများကိုပါ ထည့်သွင်းပြီး သင်၏ဖွဲ့စည်းမှုကို ထင်ရှားစေမည့် စတိုင်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပိုင်းခြားခြင်း၊ သီချင်းထည့်ခြင်း၊ ထပ်တူပြုခြင်းစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော အခြေခံတည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းပရိုဂရမ်။ ဤကိရိယာသည် ခြောက်ရက် အခမဲ့ အစမ်းသုံးရုံသာ ရှိကြောင်း သတိပြုပါ။ ဒီကိရိယာအမျိုးအစားကို အသုံးပြုသူတွေထဲမှာ၊ VideoPad သည် ၎င်း၏ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီး ရွေးချယ်စရာများစွာကြောင့် မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်း လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။
၎င်းသည် သင့်အား မတူညီသော အကူးအပြောင်းများနှင့် ဖော်မတ်ပေါင်း 50 ကျော်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြေကို ပေးဆောင်သည်။သင်၏ဖန်တီးမှုကို YouTube ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများတွင် အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ သင်လုပ်ဆောင်နေသော ဖိုင်များ၏ အရေအတွက်နှင့် အလေးချိန်ပေါ်မူတည်၍ အချို့အချိန်များတွင် ၎င်းသည် နှေးကွေးသွားနိုင်သည်။
ရိုးရိုး ကလစ်အနည်းငယ်ဖြင့်၊ သင်သည် အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် အွန်လိုင်းတွင် ပုံများ၏ ဗီဒီယိုကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။. ဤကိရိယာကို သင်ရွေးချယ်ပါက၊ သင့်ဓာတ်ပုံများကို အပ်လုဒ်တင်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ စုစည်းခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို လှုပ်ရှားသက်ဝင်စေရုံဖြင့် ဗီဒီယိုများကို အလွယ်တကူ ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရလဒ်တစ်ခုရရှိရန် သင်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုအသစ်ဖန်တီးရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို နှိပ်ပြီး သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဆက်တင်များကို ရွေးချယ်ပါ။ မြင်ကွင်းများထည့်ကာ သင့်ပုံများကို စတင်တင်ပါ။ ပြောကြားထားသည့်ဖိုင်များနှင့် ရရှိနိုင်သောဆက်တင်များကို ပြင်ဆင်ပါ။. ရုပ်ပုံအကျိုးသက်ရောက်မှုရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပြီး သင့်ဓာတ်ပုံများကို အသက်ဝင်စေပါသည်။
ကျန်ကိရိယာများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်အတိုင်း၊ Clideo သည် သင့်ဓာတ်ပုံများကို ဗီဒီယိုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤပရိုဂရမ်ကို ကိုင်ဆွဲထားပါက၊ ပုံများသာမက GIFs နှင့် ဗီဒီယိုများကိုပါ တစ်ပြိုင်နက် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။. ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့အွန်လိုင်းပလပ်ဖောင်းဖြစ်ပြီး၊ အခြားအပိုဆောင်းလျှောက်လွှာမလိုအပ်ပါ။
သင်နှစ်သက်သောပုံများကို အပ်လုဒ်လုပ်ပါ၊ ဤဖိုင်များကို အပိုင်းလိုက် ချိန်ညှိပါ၊ သင်အလိုအတိုင်း တည်းဖြတ်ပါ၊ ၎င်းတို့ကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့ကို ချုံ့ချဲ့နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့ကို တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံး အသံဖိုင်များကို ထည့်ပါ၊ ၎င်းကို ချိန်ညှိပါ။ ရလဒ်က သင့်ကိုယုံကြည်စေတယ်ဆိုရင်၊ တစ်စက္ကန့်ပိုကြာအောင် တုံ့ဆိုင်းမနေဘဲ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့် ဤပရိုဂရမ်များဖြင့် ဓာတ်ပုံများကို ဗီဒီယိုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်လုပ်ဆောင်မည့်ပုံများကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ သိထားရန်နှင့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘယ် tool က မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်ပြီး ဘယ်ဟာက အလုပ်မှာ အဆင်ပြေဆုံးလဲဆိုတာကို သိထားဖို့ သတိရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » အစီအစဉ်များ » ဓာတ်ပုံများကို ဗီဒီယိုများအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် အစီအစဉ်များ
Telegram မက်ဆေ့ချ်များကို မည်သို့ပြန်လည်ရယူနိုင်မည်နည်း။